WidhWidh Online » News » Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Horyaalka La Liga Ee Kooxaha Valencia v Barcelona.
9:35 pm » Dhacdo Naxdin iyo Murug badan leh oo qabsatey hooyo Soomaaliyeed oo ku nool Dalka South Africa(Daawo Video) 9:05 pm » Gudoomiyaha Deegaanka Buusaar ee Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo Iftiin Xuseen C/laah oo Dil Ka Badbaaday 8:25 pm » Maxaa Keenay In Caaqil Siciid Cashuur Abyan uu Caawa Dhex Jeefo Saldhiga Dhexe ee Magaalada Lascanood 7:03 pm » Dufcadii Labaad ee Iskuulka Sare Magaalada Taleex oo La Gudoonsiiyay Shahaadooyinkii Qalijabinta(Daawo Sawirada) 6:18 pm » Dagaal Xoogan oo Israsaasayn ah oo ka Dhacay Dalka ingirsiika Xaafada Woolwilch(Daawo Video+Sawiro) 4:33 pm » Daawo Muqaalka } Dhacdo Naxdin iyo Murug badan leh oo qabsatey hooyo Soomaaliyeed oo nool Dalka South Africa!! 3:09 pm » Subxaanalaaah: Nin baa soo iibsaday Timirtan, wuxuuna ku arkay Mucjisadan!! (Nala Arag aqristoow) 1:07 pm » FREE Journalist Ahmed Yuusuf Taraafiko of Erigavo City: Khatumo State of Somalia 1:04 pm » Wariye Ahmed Yuusuf Taraafiko Wali Ku Xidhan Jeelka Ceerigaabo Iyo Saxaafada Guud ee Dalka oo Cambaaranaysa Maamulka Somaliland 12:39 pm » Magalada Muqadisho oo Amiirka Alshabaab Magacyo Top ah ula Baxay Falanqeynta Kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada Leh Ee Horyaalka La Liga Ee Kooxaha Valencia v Barcelona. Published on Feb 03 2013 // CAYAARAHA ShareWeeraryahanka kooxda Valencia Roberto Soldado ayaa ku soo laabtay garoonka tababarka ka dib dhaawac uu la maqnaa, waxaana laga yaabaa inuu ku soo bilowdo kulanka caawa ay Barcelona kula ciyaarayaan Mestalla.
Kulanka: Valencia v Barcelona
Waqtiga: 9pm SGA
Alves, Pique, Mascherano, Alba Xavi, Busquets, Fabregas
Pedro, Messi, Villa Weeraryahanka kooxda Valencia Roberto Soldado ayaa ku soo laabtay garoonka tababarka ka dib dhaawac uu la maqnaa, waxaana laga yaabaa inuu ku soo bilowdo kulanka caawa ay Barcelona kula ciyaarayaan Mestalla.
Si kastaba, Dani Parejo iyo Jonas ayay u badan tahay inaysan ciyaari doonin dhaawac awgii, halka Nelson Valdez uu isna shaki ku jiro inuu ciyaari karo.
Daafaca bidix Jeremy Mathieu ayaa ka soo kabsaday dhaawac canqowga ah laakiin ma ciyaari doono kulankaan, halka Sofiane Feghouli uu ka soo laabtay koobka qaramada Afrika waxaase laga yaabaa inuu kursiga keydka ku soo bilowdo.
Barcelona ayaa dib u soo dhaweyn doonta Gerard Pique ka dib markii uu ganaax kaga maqnaa kulankii ay 5-1 kaga badiyeen isbuucii hore kooxda Osasuna.
Weeraryahan Isaac Cuenca ayaana ka maqan Barca ka dib markii maalintii ugu danbeysay ee suuqa kala iibsiga amaah lagu siiyay Ajax.
Valencia ayaa badisay afar ka mid ah shantii kulan ee ugu danbeysay La Liga.
Los Che ayaa laga badiyay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee ay la ciyaareen Barcelona iyadoo mudadaas laga dhaliyay 8 gool halka ay iyaga dhaliyeen kaliya hal gool.
Markii ugu danbeysay oo Valencia ay gurigeeda kaga badiso Barcelona waxa ay aheyd March 2008 kulan ka tirsanaa Copa del Rey iyagoo ku badiyay 3-2.
Barcelona ayaa badisay labo ka mid ah shantii kulan ee u danbeysay tartamada oo dhan.
Iyagoo dhaliyay 71 gool 21 kulan oo La Liga oo ay ciyaareen Blaugrana ayaa ah kooxda ugu weerarka fiican ilaa iyo haatan La Liga.
Lionel Messi ayaa si rikoor cusub ah 11 kulan oo isku xigta shabaqa ka soo taabtay La Liga
1 Member.732 Guests.